पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिएर भागे, झुठ बोल्दै भन्छन्, ‘झुक्किएर’ लडे ! (भिडियो) – Khabar Chautari
पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिएर भागे, झुठ बोल्दै भन्छन्, ‘झुक्किएर’ लडे ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष १९, २०७७ समय: ४:२५:५५
सर्लाहीको हरिवनमा शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह सवार गाडी पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिएर फरार भएको छ । साह सवार ना १ झ ३८४२ नम्बरको झण्डावाल गाडीको ठक्करबाट लालबन्दी घर भएका फुच्चे तामाङ घाइते भएका छन् ।
लालबन्दी–८ चन्द्रपुर बस्ने ३५ वर्षीय तामाङको खुट्टा र कम्मरमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता (डिएसपी) मदन कुँवरले बताए । उनका अनुसार मन्त्री साह रौतहटबाट महोत्तरीतर्फ जाँदै गर्दा सो दुर्घटना भएको हो । घाइतेको स्वाभिमान अस्पतालमा उपचार हुँदैछ ।